Mugadziri wehutano anowedzera zvinhu - Wisepowder BLOG
Kana uchienzanisa Pterostilbene Vs Resveratrol, iwe unozoona kuti pane zvakawanda chokwadi zvawanga uchishaya nezve izvo zviviri. Kurarama hupenyu hune hutano kunoda kuti iwe utaure pane a [...]
Glutathione inobatsira zvipenyu munzira dzakawanda nekuita se antioxidant. Iyo amino acid mukomboni uripo mumasero ese emunhu. Chero hupenyu hwehupenyu hune glutathione mumuviri wayo. [...]
Chii Chinonzi Red Yeast Rice Bvisa Red mbiriso mupunga mushoma (RYRE) inoitwa kana imwe mhando yeforoma inozivikanwa seMonascus purpureus inogocha mupunga. Mupunga unoshanduka kuita mutsvuku [...]
Chii chinonzi nhema Garlic wabvisa? Yakasviba gariki dhisiki inzira yegariki iyo inotorwa kubva mukuvirisa uye kuchembera kwegariki nyowani. Iyo kurapwa kweiyo nyowani gariki kune [...]
Chii chinonzi Resveratrol? Resveratrol ndeye yakasikwa polyphenol chirimwa chemubatanidzwa iyo inoshanda se antioxidant. Resveratrol zvinyorwa zvinosanganisira waini tsvuku, mazambiringa, majikiji, nzungu, uye chokoreti yakasviba. Ichi chikamu chinoratidzika kunge chakanyanya [...]
Anandamide (AEA): Zvese Zvaunoda Kuti Uzive Nezve
Chii chinonzi Anandamide (AEA)? Zita rekuti Anandamide (AEA) rinobva pazwi rekuti Ananda zvichireva kuti rinoburitsa mufaro. Iyo endocannabinoid iyo yakarongedzwa mumafuta ane acid amides boka. Nechimiro, [...]
Pamusoro gumi Lithium Orotate Inobatsira kune Hutano Hwako
Chii chinonzi Lithium Orotate Lithium orotate chinhu chinoumbwa nesimbi yealkali inozivikanwa se lithiamu inova chinhu chinoshanda, uye orotic acid inoshanda se [...]
Cycloastragenol (CAG): Zvakanakira, Dhiraidhi, Mhedzisiro Yezvekuita
1. Chii chinonzi Cycloastragenol (CAG) Cycloastragenol isaponin yechisikirwo yakaburitswa uye yakanatswa kubva pamudzi weiyo Astragalus membranaceus herb. Iyo simiti yeastragalus yakashandiswa muchinyakare Chinese mushonga [...]
Nei Tichida Nicotinamide Mononucleotide (NMN) Kunyangwe kukwegura kusingadzivisike, kune tarisiro yekudzosera maitiro, nekuda kweNicotinamide Mononucleotide (NMN). Kurarama kune kukwegura kwakaibva zviroto zvevanhu vese [...]